Faka i-KahelOS kusuka ku-USB | Kusuka kuLinux
Njengamanje i-KahelOS LiveCD ikumodi yezithombe eyenza ukufakwa kube okunembile kuma-newbies.
UBuddy Fredy esithangamini ubhale lokhu kufundisa ngokufakwa kwayo
Okokufundisa ukufaka kusuka kwimemori ye-flash noma kukhiye we-usb.
Sebenzisa i-Unetbootin ukwakha usb bootable.
Qalisa i-pc noma i-laptop kusuka ku-usb.
Kulokhu ukubuyisa uhlelo kusuka ku-usb, sikhetha inketho yokuqala bese siyalinda ukuthi ingene kudeskithophu yeKahelOS.
Ngemuva kokufaka ideskithophu, esikrinini sokuqala chofoza ku- «Faka i-KahelOS Now».
Esikrinini esilandelayo, faka yonke idatha yethu.
Lapho siqeda ukufaka idatha yethu sifaka i-password ROOT.
Kulesi sikrini mane uchofoze OKULANDELAYO. (lesi sinyathelo ukukopisha idatha ekhona ku-hard drive iye kwangaphandle)
Kulesi sinyathelo sikhetha i-hard drive esizoyisebenzisa. (Qaphela. Khumbula ukuthi ama-KahelOs afakwe kuyo yonke i-hard drive.) Bese uchofoza ngokulandelayo.
Chofoza inkinobho ethi FAKA bese uqinisekisa ngokuchofoza ku-YES
Ngemuva kwalokho silinda ukufakwa kuqede.
ngemuva kokulinda okufushane, chofoza ukuqala kabusha.
Lapho siqala kabusha i-KahelOS yethu isilungele ukuqala ukusebenza.
Esikrinini esedlule singabona i-OS ngephaneli esehlangothini langakwesokudla elisinikeza izinqamuleli.
Uhlu oluncane lwezicelo:
Isidlali seFlash, Ushizi, iChromium, iDropbox, i-Epiphany, iFayilezilla, iHotot, iLibreCad, iSribus, isidlali semidiya seVlc nezinye izinhlelo eziningi.
Uhlelo lokusebenza lwe-Add and Remove lwenza kube lula ngathi ukufaka izinhlelo zokusebenza.
Into esemqoka okufanele uyiqaphele ukuthi i-KahelOS ayikwazi ukufakwa kuma-partitions, ngakho-ke qaphela uma kunezinye izinhlelo kwi-hard drive.
Ngokusebenza kohlelo ngenze izivivinyo ezincane namafayela acindezelwe, ngokwesibonelo, iRAR ayiyivuli ngakho-ke siya ku-Add / remove program, sibheka i-7zip, siyikhethe bese siyifaka, kuxazululwe inkinga.
Kwiphaneli engakwesobunxele ezansi kuvela «Amasethingi Athuthukile» ukuguqula izilungiselelo zama-plugins we-Gnome Shell, izingqikithi nokunye.
Amafayela afana ne-mp3, wma, flv, avi noma i-webm ene-vlc ayikho inkinga yokukhiqiza kabusha.
Ukushintsha ulimi iya kuzicelo nakuLimi shintshela ku-Spanish.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka i-KahelOS kusuka ku-USB
Ngelinye ilanga ngizosebenzela isifaki sokuqhafaza se-arch XD
Ukulayisha i-KISS, akunjalo? I-LOL
Mhlawumbe yebo futhi mhlawumbe cha 😛
Akuyona i-chakra ne-archbang yalokho phakathi kwezinye izinketho?
Uphuthelwe isinyathelo 6, noma wenze iphutha lapho ufaka izinombolo. Kulula kakhulu ukufaka +1.
Izinombolo ezihleliwe esithangamini.
Inhle… Ukufakwa kwe-KahelOS.
I-distro iyathakazelisa, isusa ingxenye enzima kunazo zonke ye-Arch, ukufakwa, lapho ishaywa unhlangothi, kepha ngizwa ukuthi ilahlekelwa umusa wayo ngale ndlela, kepha noma kunjalo, njengeGnome elingana neChakra noma i-Archbang, ibukeka kahle kakhulu.
Okwenzeka kimi ngama-kahelos ukuthi lapho ukufakwa sekuphelile futhi ikhompyutha iqala, ingitshela ukuthi ayikwazi ukuthola noma iyiphi idiski ebhuthayo. Noma yimuphi umqondo kungani?
Bheka i-oda le-boot ku-BIOS
kune-hard drive kuphela ye-laptop futhi ilungile kuma-Bios. ngakho awazi ukuthi kungaba yini.
Kulula kakhulu ukufaka, kuzomisa kuphi, ngingumsebenzisi omusha futhi kimi ukufakwa okujwayelekile kubukeka njenge-odyssey, ngaphezu kwanoma yini ngoba ukuxhumana enginakho kwi-inthanethi yi-wifi.
Ngibona amaphuzu amabili kuphela ngokumelene nayo, ngicabanga ukuthi angikayifaki.
Ayiwahloniphi ama-partitions, ifakiwe kuyo yonke i-hard drive kanti okwesibili ukuthi i-wifi nayo ayingiboni.
Kuza ne-GNOME 3 ngokuzenzakalela, (ngokwami ​​ngithanda i-gnome2), ngicabanga ukuthi lokho kungaba lula ukukulungisa.
Okungimise kakhulu ukwahlukanisa.
Ngine-500 Gb HD, 4 Partitions, 3 ye-OS nenye yedatha ye-300 Gb, yingakho ukwahlukaniswa.
Ngicabanga ukuthi kuzofanele ngilinde inguqulo yakamuva.
Noma kunjalo umsebenzi omuhle kakhulu.
Ku-ISO entsha ye-Kahel OS, isifaki sesivele sikuvumela ukuthi ukhethe futhi uhlele ukwahlukanisa, angazi noma ngabe isixhumanisi sesivele sibuyekeziwe endaweni yokulanda, kepha kubhulogi yaso siyashicilelwa: